Tag: ipad app | Martech Zone
Chishanu, May 23, 2014 Mugovera, Chivabvu 24, 2014 Douglas Karr
BrightTag, yegore-based kushambadzira chikuva chevatengesi veInternet, yatenga Signal. Signal inzvimbo yepakati yekutengesa yemuchinjikwa chiteshi kushambadzira kuburikidza neemail, SMS uye midhiya yemagariro. Zviratidzo zvinoratidza: Email matsamba enhau - pre-yakavakwa, mafoni-akagadziridzwa matemplate eemail ekushandisa kana kugadzira yako wega. Kutumira mameseji - kuvhura chirongwa chinoshanda uye kutevedzera zvinodiwa nemutakuriri. Zvemagariro midhiya kutsikisa - shambadza chinzvimbo chako paFacebook neTwitter, uchishandisa mapfupi ma URL kuteedzera zvemukati.
Isu nguva pfupi yadarika tanga tine webinar pane sainzi yekutaura nyaya neshamwari dzedu kuCantaloupe.tv. Hazvisi zvitsva mukutengesa uye kushambadzira, asi nekuda kwechimwe chikonzero, kutaura nyaya kwave kungotanga kucherechedzwa mumakore apfuura. Vatengi nevatengi vebhizimusi vagara vachishandura zviri nyore kana paine kushushikana kwepamoyo pakati pavo nemavara avanoda… asi zvinonakidza kuti vekare, zvinyorwa uye zvinotyisa midhiya zvinoramba zvichititambudza paterevhizheni newebhu.
App Press yakakwidziridzwa kubhara gwanza reruzivo pakati pevanogadzira graphic uye vanogadzira. Semugadziri, muvambi Grant Glas aida kuvaka maapplication kodhi mahara. Semugadziri, Kevin Smith akanyora mhinduro. Vakagadzira maapplication makumi matatu nematatu vachishandisa yekutanga vhezheni yeApp Press uye kubvira pakatanga, vashandisi ve32+ vakagadzira maapps papuratifomu yavo. App Press yakasikwa kutaridzika senge Photoshop uye inoshanda seKeynote. Izvi zvinobvumira chero mugadziri kusvetuka